ညိမ်းညို: January 2010
အကောင်လေး ၃၆၀ ပေါက်ဖွား၊
အလွမ်းဟာ နံရံတွေဆီ အမြစ်တွယ်လို့။
တ- လေတစ်ဝှေ့ (၀ါးတစ်လှည်းလုံးဖုတ်ထားရတဲ့ ပြာတစ်ဆုပ်အတွက်)
ဒု- အပ်ဖျားတစ်ထောက်စာ (လေပြည့်နေတဲ့ ပူစီပေါင်းတစ်လုံးအတွက်)
ပ- မေ့လိုက်ပါ (တစ်ဘ၀လုံးစောင့်ခဲ့ရသူအတွက်)
ဘာသိဘာသာထောင့်ချိုးတစ်ခုမှာ သိုးနေအောင် အိပ်ပျော်ပါစေတော့။
မင်းကို ခုနစ်တန်းကျောင်းသားထဲက ချစ်ရေးဆိုခဲ့တာပါကွာ
၁၂နှစ်တာ ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီး ပြန်လာပါကွာ
မင်းက ငါ့ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ယူပြီး ခရီးအဝေးကြီးထွက်သွားတော့
ငါ့မှာ ကွင်းပြင်ထဲ ထီးထီး
ခြေလက်မလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ စာခြောက်ရုပ်လို ကျန်နေခဲ့တာပေါ့
တခါတလေ ၀ါးလက်ခုပ်အားကိုးနဲ့ ငှက်ပေါက်စနလေးတွေကို ခြောက်လှန့်ရသလိုမျိုး
ရွာရိုးကိုးပေါက်အောင် ငါ့သွေးထဲ မင်းလာလျှောက်ပါတော့။
- အဆုံးရှုံးဆုံးခရီးဆိုတာ လက်မဲ့ခြေဗလာနဲ့ ညထဲကထွက်လိုက်ရတဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုပေါ့။ ကဗျာကိုတူးဖော်လို့မရတဲ့ ညတွေဟာ ကျနော်ရှုံးရတဲ့ ညတွေပါပဲ။
Posted by ညိမ်းညို at 01:30 11 comments Links to this post
ကဗျာတစ်ပုဒ် လမ်းလျှောက်ထွက်နေရဲ့ ။
Posted by ညိမ်းညို at 00:05 8 comments Links to this post
- အရင်က တစ်ခါတင်ဖူးပါတယ်။ အခုပြန်တင်ပါတယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 02:143comments Links to this post
‘အနာဂတ်အကြောင်း ပြောတယ်ဆိုတာ၊ တမင်လိမ်တာ မဟုတ်ပေမဲ့ မုသားဖြစ်ချင်လဲ ဖြစ်သွားတတ်တယ်။’ (အာရပ်စကားပုံ)
လူ့သမိုင်းတစ်လျောက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေက အတော်ပဲ ရှုပ်ထွေးတယ်။ အလှည့်အပြောင်း များတယ်။ ဘာပြီးရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စီစဉ်တကျရှိမှုမျိုး၊ နေသားတကျရှိမှုမျိုး အတော့်ကိုရှားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပညာရှင်အထွေထွေက နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ရှေ့အလားအလာအတွက် ဟောကိန်းတွေ ထုတ်ပေးလေ့ရှိကြတယ်။ ဟောကိန်းဆိုတာထက် မျှော်ခေါ်ချက်၊ ယူဆချက်တွေပေါ့။ ဖြစ်လာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သက်သေအစုံအလင်၊ စမ်းသပ်မှုအပုံအပင်နဲ့ ကျိုးကြောင်းဆီလျော် ဖော်ထုတ်တင်ပြကြတာပါပဲ။ သို့ပေမဲ့ ကံသေကံမ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ ဘယ်ပညာရှင်မှ အာမ မခံပါဘူး။ လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စံနှုန်းနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးရဲ့ အရွေ့တွေ၊ ပါရာဒိုင်းတွေက ‘မမြဲခြင်း’ ဆိုတဲ့ အနှစ်ချုပ်သဘောကို ဆောင်နေလို့ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
အကြားအမြင်ပေါက် ဟောကိန်းတွေ မထုတ်သင့်တဲ့အထဲမှာ အနုပညာဟာ ထိပ်ဆုံးကပါမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေကတော့ တချိန်မှာ မုချကျဆုံးမယ်၊ ဘယ်အမျိုးအစားတွေကတော့ မှတ်တမ်းဝင်ကျန်ရစ်ခဲ့မယ်။ အဘယ်အမျိုးအစားမှသာလျှင် ပြည်သူနဲ့ထပ်တူကျတယ်၊ ဘယ်အယူအဆ…၊ ဘယ်ဝါဒမှ….. စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ယူဆချက်၊ သုံးသပ်ချက်အနေနဲ့ ဘောင်တစ်ခုအတွင်းမှာ အကြုံးဝင်ပေမဲ့ သေချာပေါက် အတပ်ဟောကိန်းကြီးအနေနဲ့ အကြားအမြင်ပေါက်ပြတဲ့ အခါမျိုးကျ အချိန်ကာလရဲ့ စမ်းသပ်မှုအောက်မှာ အတော်လေး အရုပ်ဆိုးသွားတတ်တာမျိုးပါ။ အနုပညာကိစ္စမှာ လတ်တလော အဆင်ပြေမှုတစ်ခုကိုသာ ကြည့်ပြီး၊ နောက်အနှစ် ၆၀မှာ ဆင်ဖြူတော်ကြီး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ဦးပေါ်ဦးရဲ့ လျှောက်ထားချက်မျိုးကို အားမကျသင့်ပါဘူး။ နောင် အနှစ် ၆၀မှာ ကျနော်တို့အားလုံး သေသွားပြီထား၊ ကျနော်တို့ တွေးခဲ့ရေးခဲ့ကြတဲ့ စာတွေကတော့ ဆက်ပြီး ကျန်နေခဲ့ဦးမှာ မို့ပါပဲ။
၂၀ရာစု စာရေးဆရာ မာဘယ်လ်ပရော့စ်ရဲ့ စကားကို ကိုးကားခွင့်ပြုပါ။
‘ဟုတ်ပါတယ်။ စကြာဝဠာကြီးဟာ ကျနော်တို့အားလုံးအတွက် အမှန်တရားပေါ့။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ အတွက်တော့ တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာပေါ့။’
ပန်းဟူသမျှ လှိုင်ကြပါစေ- မင်းသုဝဏ်
အနုပညာဟူသမျှ ပြိုင်ကြပါစေတော့ မရှိကောင်းဘူးပေါ့။ အနုပညာဟူသမျှ လှိုင်ကြပါစေ။
Posted by ညိမ်းညို at 18:083comments Links to this post
Posted by ညိမ်းညို at 02:12 8 comments Links to this post
Posted by ညိမ်းညို at 01:002comments Links to this post
သုံး နဲ့ တစ်
သုံး အချိုး တစ် သို့မဟုတ် သုံးပုံတစ်ပုံ
သုံး နဲ့ တစ် ဒါမှမဟုတ် သုံး အပေါင်း တစ်
ခေတ် နဲ့ စနစ် အရ
ဒီလိုပဲ ဇယားချလိုက်မယ်ကွာ ။
ကဗျာတွေအပေါ် လူမသိ သူမသိ ၀ါးမျိုချင်တတ်တဲ့
အရေးအကြောင်းဆို လူနဲ့ မလိုက်အောင် ပေါ့ပါးချက်ချာတဲ့
ရင်ဘတ်အနီးဆုံး ကဗျာဆရာရေ ။
မင်းဟက်ဟက်ပက်ပက် မရယ်နိုင်သေးတဲ့ တစ်ချို့ရော
မက်မက်စက်စက် ပျော်ဝင်ခဲ့တဲ့ တစ်ချို့တွေရော
အဆပေါင်းများစွာ ရှည်လျားဝေးကွာနေပေါ့ ။
လူပစ်အများဆုံး ဖဲက ငတို့ပဲ
မင့် အရက်မူးတဲ့အခါ ဆေးလိပ်မီးညှိသလိုပေါ့
မြင်ရက်နဲ့ လွဲ လွဲနိုင်လွန်းတယ်ကွာ ။
ငတို့ ရပ်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ
ငတို့ ဆက်မယ့်ဟာ ဘာအတွက်လဲ
ငတို့ အရည်ရွှမ်းတဲ့ အသီးတွေ သီးကြမယ်ကွာ
ငတို့ စိုက်ဖို့ မြေယာကြမ်းခင်းတွေက
ထုထည် အုံကျင်း အသင်းအပင်းနဲ့ပေါ့ ။
ငတို့ အသက်မအောင့်ပဲ သက်သေပြကြတာပေါ့ ။
ကဗျာလောဘ သားကောင်ကြီးရေ ..
အနုပညာလယ်ဧကပေါင်းများစွာကို အားပါးတရ သိမ်းပိုက်ချင်နေတဲ့
ထွန်တုံးပေါ်က ကဗျာဆရာရေ ။
(မင်းသမီးက သူမဟုတ်မှန်း မင်းတို့ ငတို့သိပါရဲ့ကွာ)
မင့် ကျောပိုးအိတ်ကြီး ချိတ်ပေါ်ရောက်လို့
မင့်ပခုံးပေါ် ဘေးလွယ်အိတ်ရောက်လာတာလည်း ခေတ်ပဲ
ကော့ညက်ကုန်လို့ ဗော့ဒကာပြောင်းရတာလည်း ခေတ်ပဲ
ငတို့ လွှင့်ပစ်ရမှာလည်း ခေတ်ပဲ
ငတို့ သောက်ပစ်ရမှာလည်း ခေတ်ပဲ
ငတို့ မြည်းပစ်ရမှာပဲလည်း ခေတ်ပဲလေ ။
ငတို့က ဘောလုံးတစ်လုံးဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မယ်ကွာ
ဟောဒီခေတ်က အသိဆုံးပါ ဘိုညိမ်းရေ ... ။
သူတို့ခြယ်ပေးထားတဲ့ အရောင်ကြမ်းတွေအောက်က လူတစ်ယောက်
ဘယ်လောက်ထိ နှလုံးသားလားမြောက်တယ် ဆိုတာ
ငတို့ရဲ့ ထိချက်အကျမှာ တိုင်ပင်တွေပြကြတာပေါ့ကွာ ။
မင့် ချိန်သားလှပါစေ ဘိုညိမ်းရေ ။
၀ိုင်လိုကဗျာတွေ စီမံတဲ့ လူကြီး
အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် စကားလုံးတွေ သယ်နိုင်တဲ့ကောင်ကြီး
တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း သစ္စာတိုင်တေးချင်းတွေ ရွတ်တတ်တဲ့ လူကြီး
နက်ပြာရောင် ကုတ်အကျီ င်္ မကြာခဏ ၀တ်တတ်တဲ့ ကဗျာဆရာရေ ။
ဘယ်ဆို ညာ ညာဆို ဘယ် (အံကျ)
အလိပ် ၅၀ နော် ဦးတင့် ။
မင့်အတွက် တနင်္ဂနွေနေ့ဟာ သစ္စာ
Swatch နာရီတစ်လုံးဟာ မေတ္တာ
ငါ့လိုလည်း ခွက်အများကြီး မသောက်နဲ့ ပေါ့ကွာ ။
မင်းတို့ ငတို့လည်း မူးကြတာပါပဲကွာ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လစ်မစ်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့
မင်းလည်း ကဗျာပါးဝပြီးသားပါ ဦးတင့်ရာ ။
ပုံမှန်လေးပဲ သောက်ကြပါစို့ကွာ ။
ငါက မင်းတို့ကို ချစ်တယ်
ငတို့ရဲ့ ယောကျာ်းချင်းချစ်တဲ့အချစ်မှာ Anti-Virus မလိုဘူး
ငတို့ ချစ်တဲ့ အချစ်မှာ
ကဗျာတွေနဲ့ ပစ်ကြပါစို့ကွာ ။
(အဲဒီစစ်မှာ မီးတောက်တွေမပါဘူးနော် )
(အဲဒီ မိုက်သားထဲ မင်းတို့ အားတွေလည်းပါတယ် )
မင်းတို့အပေါ် ထူးဆန်းတဲ့အချစ်တွေနဲ့ ချစ်လို့ပေါ့ကွာ
မင်းတို့တင် မကတာတွေ အတွက်
(အချို့ အချို့ ၊ အချို့သော အချို့သောတွေ အတွက်)
ဒီတစ်ခွက်လောက် မငှဲ့လည်း အကျိုးမနည်းလောက်ပါဘူးနော်
အဆင်ပြေတယ်နော် ဦးတင့် ။
အိပ်ရာကနိုးတိုင်း ခေါင်းအုံးပေါ် ကြွေကြွေကျနေတယ်
(တစ်ချို့တစ်လေများ အဲလိုကြွေသွားခဲ့ရင် ငါဝမ်းသာမိကောင်းပါရဲ့)
ဗောက်တွေ ဗလပွနဲ့ အဲဒီဆံပင်ရှည်တွေကို
(နွေရာသီများဆို သိပ်ပူတာပေါ့ကွာ) ။
ငတို့က ခရီးရှည်ချီတက် ထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်နေတာကလား
မဟုတ်ဘူးလား မောင်လွမ်း ။
ငါက မေမေ့ကို ချစ်တယ် မောင်လွမ်းရေ
ပြီးတော့ ကဗျာတွေကို ချစ်တယ် ဘိုညိမ်းရ
နောက်တော့ မင်းတို့ကိုချစ်တယ် ဦးတင့်
ငါရှိုက်မိတဲ့ အငွေ့တွေကို ပြန်မထုတ်ရဲလောက်အောင်ကို
တုန်တုန်ရီရီ နဲ့ နင့်နင့်စီးစီး ချစ်တာပါကွာ ။
ငတို့ မင်းတို့ ရှုတဲ့လေထဲ
ငါ့ကြောင့် မင်းတို့ အဆိပ်မသင့်စေရဘူးကွ
အဲဒါအရိုးဆုံး လက်ဆောင်တစ်ခုပါ ။
မင်းတို့ ငတို့ ချစ်ခြင်းထဲမှာ
နားလည်မှုသားတွေ ထူပြည့် မို့လျှံနေလေရဲ့ ။
ထွေထွေထူးထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး အာစရိရယ်
ဒီလိုဆို အဆင်ပြေတယ် မဟုတ်လား အာစရိ
အံမှကျပါစ ဘိုညိမ်းရေ ။
ငတို့ ရင်ဘတ်နဲ့ တစ်ရွက်ပြီးတစ်ရွက်လှန်မယ်
တစ်ထပ်ပြီး တစ်ထပ် စားမယ်
တစ်ချက်ပြီး တစ်ချက် လှော်မယ်
ပြီးတာ့ ရွရွလေး ရွတ်ကြမယ်
မနက်ဖြန် ဆိုတာ နေ့သစ်တစ်နေ့ပဲလေ ။
၂၇ + ၄+ ၉+ ၁၆ = ၀ = ကဗျာ
Posted by ညိမ်းညို at 01:165comments Links to this post
The year is withering, the wind
Blows down the leaves;
Men stand under eaves
And overhear the secrets
Of the cold, dry wind
Of the half-bare trees.
The grasses are tall and tinted,
Straw-gold hues of dryness,
And the contradicting awryness,
Of the dusty roads a-scatter
With pools of colourful leaves,
With ghosts of the dreaming year.
And soon, soon the fires,
The fires will begin to burn,
The hawk will flutter and turn.
O, its wing and swoop for the mouse
The dog will run for the hare,
The hare for its little life.
လျှို့ ၀ှက်စကားကို ကြားရဲ့ ။
ဂါနာက နာမည်ကျော် ကဗျာဆရာတစ်ဦးပါ။ ခြောက်သွေ့ရာသီမှာ နွေရှုခင်းကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖွဲ့ထားပါတယ်။ ဆိုရရင် ကျနော်တို့ မြန်မာစာပေမှာလည်း နွေဖွဲ့ အင်မတန်များပါတယ်။ ခေတ်ဟောင်းခေတ်သစ် ကဗျာဆရာအသီးသီးက နွေကို တရှိုက်မက်မက် ဖွဲ့ကြလေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ကျနော်တို့ဆီက နွေဖွဲ့နဲ့ ကွေစီဘရူးရဲ့ နွေဖွဲ့ဟာ ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ကွားခြားတယ်ဆိုရာမှာ အကောင်းအညံ့ နှိုင်းယှဉ်လိုတဲ့ သဘောမဟုတ်ကြောင်း စကားခံပါရစေ။
ခြောက်သွေ့ရာသီလို ၀န်းကျင်ဖွဲ့ကဗျာတွေရေးတဲ့အခါ ကဗျာဆရာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကွာခြားရတာဟာ သူတို့ကျင်လည်ရာ သဘာ၀၀န်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင်တို့ မတူညီကွဲပြားတာနဲ့ ဆက်စပ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လူမှုဝန်းကျင်မှာပဲ ခေတ်စနစ်အခြေအနေ၊ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးအခြေအနေတို့ အကြုံးဝင်ဦးမှာပါ။ ကျနော်တို့ နှုတ်ဝယ်ရွရွ အာဂုံဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ရှေးကဗျာလင်္ကာတွေထဲမှာတော့ နွေဟာ မပါမဖြစ် ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီးပါပဲ။ သူတော်စင်မထေရ်တို့တောင် ဖြေမဆည် မျက်ရည်ဆို့ရတယ်လို့ အဆိုရှိတဲ့ နွေရဲ့ သာမောဖွယ် သဘာဝအလှတရားက ခေတ်အသီးသီးက စာဆိုတို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို လွှမ်းမိုးခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ပုရစ်ဖူးပုရစ်နုလေးတွေ ထွက်ပြူတာကအစ တောင်သူဓလေ့ ယာမီးကြွေ့တာအဆုံး အရာရာဟာ ကြည်နူးဖွယ်ရာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာ့လူမှုဝန်းကျင် နွေရဲ့ဇာတ်ခုံပေါ်မှာတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် အနိဌာန်ရုံတို့ ကင်းပနေတယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ဆီက နွေဖွဲ့အများစုဟာလည်း ကြည်နူးဖွယ် ဆွတ်ပျံ့ဖွယ် အအေးဓာတ်လေးတွေ ကိန်းနေလေ့ရှိတာပေါ့။
ကွေစီဘရူးတို့ နိုင်ငံတည်ရှိတဲ့ အာဖရိကမှာတော့ ဖိနှပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေ၊ ရောဂါဘယကပ်ဆိုးတွေ၊ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲမှုတွေ ဒင်းကြမ်းရှိနေပါတယ်။ ကွေစီဘရူးဟာ ဒီလိုလူမှုဝန်းကျင်းမှာ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ ကဗျာဆရာဆိုတော့ သူ့ရဲ့ နွေဖွဲ့ကဗျာဟာလည်း သူ့လူမှုဝန်းကျင်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်စေပါတယ်။
ပထမပိုဒ်မှာ သူဟာ နွေကို ရိုးရိုးလေးဖွဲ့လိုက်တယ်။ ရာသီစက်ဝန်းတစ်လျှောက် ခရီးနှင်နေရတဲ့ အချိန်(နှစ်)ဟာ နွေကိုဆိုက်ရောက်လာတော့ အတော်ကို ရင့်လျော်ညှိုးလျော်နေပါပြီတဲ့။ အေးမြတယ်ဆိုပေမဲ့ ရေခိုးရေငွေ့ကင်းစင်တာမို့ လေကခြောက်သွေ့နေတာပေါ့။ အဲဒီလေက တိုက်ခြွေထားလို့ သစ်ရွက်တွေလည်း တုံးလုံးပက်လက် လဲနေကြတယ်။ သစ်ရွက်တွေ ကြွေတချို့ ကျန်တချို့ ရှိနေတာကို ကဗျာဆရာက တစ်ဝက်ဗလာသစ်ပင်လို့ သုံးလိုက်ပါတယ်။ သစ်ရွက်ခြောက်တွေကြား လေတိုးတော့ တရှဲရှဲမြည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို တွတ်ထိုးတယ်၊ စကားတီးတိုးဆိုတယ်လို့ပဲ အများစု ဖွဲ့ကြလေ့ရှိပါတယ်။ ကွေစီဘရူးကတော့ ‘လျှို့ ၀ှက်စကား’ ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ လတ်ဆတ်စေပါတယ်။
ကွေစီဘရူးတွေ့နေရတဲ့ နွေရဲ့ ရှုမျှော်ခင်းဟာ တပြန့်တပြောကြီး မဆုံးနိုင်အောင်ပါပဲ။ နွေရဲ့အပူဒဏ်ကြောင့် ညှိုးလျော်နွမ်းဖျော့နေတဲ့ မြက်ပင်ရှည်တွေကို ကောက်ရိုးရွှေရောင်တွေ စွန်းနေတယ်တဲ့။ ဖုန်ထူထူလမ်းတွေကလည်း ဟိုသည်ကျဲပြန့်နေကြတယ်၊ ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်နဲ့ ကိုးရိုးကားယား ရှိနေကြတယ်တဲ့။ သစ်ရွက်ခြောက်တွေ အများကြီးစုပုံနေတာကို သူက ‘သစ်ရွက်အိုင်’ လို့ သုံးလိုက်ပါတယ်။ သစ်ရွက်ခြောက်တွေမှ မနည်းမနောကြီး၊ အိုင်ထွန်းနေတာပဲလို့ ဆိုလိုက်ပုံပါ။ အဲဒီသစ်ရွက်ခြောက်တွေရဲ့ မတည်မြဲတဲ့ မရေရာတဲ့ အားအင်မပြည့်တင်းတဲ့သဘောကိုယူပြီး အိပ်မက်ဆဲနှစ်ရဲ့ တစ္ဆေများလို့ ထပ်မံညွှန်းဖွဲ့ပါတယ်။
ဒီအထိတော့ သူ့ရဲ့ နွေဖွဲ့ဟာ ပုံမှန်ဖွဲ့ဆိုနေကျ ရှုခင်းရှုကွက်များပါပဲ။ ခြောက်သွေ့တဲ့ ပျင်းရိညည်းငွေ့စရာကောင်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ေ၀၀ါးနေတဲ့ မှိုင်းပျမြင်ကွင်းများပါပဲ။ နောက်ဆုံးအပိုဒ်မှာတော့ ကဗျာဆရာဟာ သူပြောချင်တဲ့ ဘ၀တိုက်ပွဲ(သို့) သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လူမှုဘ၀တွေကို ရုတ်တရက် လန့်ဖျတ်ပေါ်လွင်လာစေခဲ့တယ်။ ကြည့်ပါဦး။ မီးတွေ..မီးတွေ လောင်ကြတော့မယ်။ လောင်တာမှ သိပ်ဝေးတဲ့အနာဂတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ မကြာမတင်လေး…မကြာမတင်လေးမှာကို လောင်တော့မယ်တဲ့။ တောမီးလောင်တော့ တောကြောင်တွေ လက်ခမောင်းခတ်တော့မဲ့အချိန်ပေါ့။ သိန်းငှက်နဲ့ အမဲလိုက်ခွေးကို ကဗျာဆရာက ဆွဲယူသရုပ်ဆောင်စေတယ်။ မြေပြင်ပေါ်က လယ်ကြွက်မြေကြွက်တွေကို သိန်းငှက်တွေက ဝေဟင်ကနေ ပျံဝဲထိုးသုတ်ကြတော့မယ်။ အစားမခံရအောင် လွတ်အောင် ပြေးကြရှောင်ကြပေရော့။ အမဲလိုက်ခွေးကလည်း ထို့အတူပဲ။ သူ့အစာအတွက် ယုန်ကိုလိုက်နေတယ်။ ယုန်ကလည်း သူ့ဘ၀လေးရပ်တည်နိုင်ဖို့ သူ့အသက်လေးဆက်နိုင်ဖို့ လွတ်အောင်ပြေးရရှာတယ်။ သတ္တ၀ါအပေါင်းဟာ ဒီလိုပဲရုန်းကန်ရှင်သန်နေရတယ်။ အားကြီးသူက အားနည်းသူအပေါ်နိုင်စားတယ်။ နိုင်သူကျန်ရစ်မယ်ဆိုတဲ့ တောရဲ့ ဥပဒေသဟာ လူတွေ ကျင်လည်နေထိုင်တဲ့ဝန်းကျင်မှာကို ခုထိရှိနေတုန်းဖြစ်တယ်။ ဒီသဘောကို ဆရာကြည်အောင်ကလည်း ‘တောရဲ့ တရား’မှာ ဒီလို ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဂျာမန် နစ်ရှေး ဖြစ်ဖြစ်
အင်္ဂလန် ဒါဝင် ဖြစ်ဖြစ်
ဒီတရားဟာ ရှင်သန်ဆဲ။ (တောရဲ့တရား ကဗျာမှ)
ကွေစီဘရူးဟာ လေပြေခြွေလို့ သစ်ရွက်လေးတွေကြွေတာကနေ သတ္တ၀ါတွေရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ပုံရိပ်၊ အားကြီးသူနဲ့ အားနည်းသူတို့ရဲ့ ပဋိပက္ခပုံရိပ်တွေထိ ဆွဲယူသွားလေတော့ သူ့နွေဖွဲ့ဟာ ၀န်းကျင်ဖွဲ့တွေထဲမှာ မတ်တပ်ထွက်ရပ်နေတော့တာပေါ့။
Posted by ညိမ်းညို at 00:203comments Links to this post
ကောင်းကင် မြေပြင် စုံလင်သက်ဝင်စွာ
၀တ်ရည်အပြည့်နဲ့ ကိုင်းညွှတ်နေတဲ့ ပန်းကလေး
မျက်ရည် ဂီတ၊ အိပ်မပျော်သောညများ
တစ်ပတ် ခြောက်ရက်မျှ ငေးနေရုံသာ။
ထမင်းအနပ်တိုင်းမှာ ရင်ငွေ့နဲ့ အာငွေ့နဲ့
မိဘမေတ္တာထမင်းဆိုင်က မိုးအလင်း ၂၄နာရီ
အခန်းလေးထဲ အိမ်ရနံ့ဟာ တဇတ်ဇတ်ခုန်လို့
Posted by ညိမ်းညို at 23:183comments Links to this post
မှတ်ချက်။ ငါ့လက်မ မပါက ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ၊
Posted by ညိမ်းညို at 11:573comments Links to this post
အတ္တ၊ မာန ကင်းပကြဉ်ခွာ။
ပရ၊ ဉာဏ လင်းမြညီစွာ။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက ဒီကဗျာလေး ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ခုတိုင်အောင်လည်း ဒီဆုကိုပဲ လိုလားတောင့်တမိပါတယ်။ အတ္တ ပရ သဟဇာတကျကျ ညီညွတ်လှပချင်တယ်။ မာန်မာနအဖုအထစ်နဲ့ တင်းခံပိတ်ဆို့စေတဲ့ အရာကိစ္စတိုင်း သင်ကြားမှုတိုင်းမှာ ရိုးဖြောင့်တဲ့စိတ်အခံ၊ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းတဲ့ အသိနဲ့ အစားထိုး ဖြေရှင်းနိုင်ချင်တယ်။ ၂၀၀၉ မှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခဲ့ရတာတွေအတွက် မိဘ ညီအကိုမောင်နှမများနဲ့အတူ ဆရာ၊ဆရာမများ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
အထိအခိုက် အရှအနာကင်းသော စစ်ပွဲရယ်လို့တော့ ဆုတောင်း၍ ရကောင်းမည် မထင်ပါ။ စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ကြခြင်းကသာ အထိအခိုက် အရှအနာကင်းဖို့ အသင့်တော်ဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ တစ်ဦးဆိုင်နာမ် စစ်ပွဲကလေးတွေကနေ အများဆိုင်နာမ် စစ်ပွဲကြီးတွေအထိပေါ့။
စာသင်ကျောင်းတွေမရှိသေးတဲ့၊ စာပေနဲ့ ဘာသာစကား မတွေ့ရှိသေးတဲ့၊ အသိအမြင် ဘာသာတရားမထွန်းကားသေးတဲ့ ဟိုးကျောက်ခေတ်တွေတုန်းကတော့ လူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုနာကျင်အောင်၊ ထိခိုက်အောင် လုပ်လာတယ်လို့ ယူဆရင် ကျောက်ချွန်ကျောက်သွားတွေ ကျောက်လက်နက်တွေကို အရင်သတိရတတ်တာ သဘာဝကျမှာပါ။
အာကာသယာဉ်တွေစီးပြီး ကျောက်ခေတ်ကို ဘက်ဂီယာပြန်မထိုးမိဖို့ ကျနော်တို့ ကျနော်တို့ချင်းပဲ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စကားတွေပြောကြရအောင်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ လက်နက်တွေကို ကိုယ်စားမပြောခိုင်းကြေး။ ကျနော်တို့ ကျနော်တို့ချင်းပဲ ကဗျာတွေ စာတွေရေးပြီး နွေးထွေးကြရအောင်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ လက်နက်တွေကို ကိုယ်စားမပြောခိုင်းကြေး။ ကျနော်တို့ ကျနော်တို့ချင်းပဲ ထမင်းအတူစားရင်း၊ သစ်ပင်အတူစိုက်ရင်း၊ ဘောလုံးအတူကန်ရင်း သူ့ဝမ်းကိုယ့်ဝမ်း မြိန်စေကြရအောင်၊ သူ့ခြံကိုယ့်ခြံ စိမ်းလန်းစေကြရအောင်၊ သူ့ခွန်အား ကိုယ့်ခွန်အား ဖွံ့ဖြိုးစေကြရအောင်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ လက်နက်တွေကို လူစွာ ၀င်မလုပ်ခိုင်းကြေး။ တွေးခေါ်ပြီး ဆင်ခြင်ပြီး ကြံဆပြီး အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ ဦးနှောက်ကို ညှစ်ကြရအောင်။ စာနာပြီး အပြန်အလှန်ဝေမျှပြီး ယုံကြည်နားလည်ပြီး အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ နှလုံးသားကို ညှစ်ကြရအောင်။ မောင်းခလုတ် ညှစ်ရတာထက် လေးနက်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို အတူတူ ရှာကြရအောင်။ လက်နက်တွေနဲ့ အကြောက်တရားရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ လူအဖြစ်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ အသိဉာဏ်တို့ မသိမ်ငယ်ပါရစေနဲ့လား။
နံနက်ခင်းသို့ ဖြူရှင်းလင်းမြစေ… ညခင်းတို့ မြူကင်းဝင်းပစေ...
Posted by ညိမ်းညို at 00:279comments Links to this post